ဆိုးလ်ရှားအထုတ်ပြင်ဖို့အတွက် ဂလေဇာမိသားစု အချက်ပြ မျက်စိကျနေတဲ့ ထိပ်တန်းနည်းပြ ၃ ဦးရှိလာ…. – Sport Gaber
ဆိုးလ်ရှားအထုတ်ပြင်ဖို့အတွက် ဂလေဇာမိသားစု အချက်ပြ မျက်စိကျနေတဲ့ ထိပ်တန်းနည်းပြ ၃ ဦးရှိလာ….
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီးအသင်း တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်မိသားစု ဖြစ်တဲ့ ဂလေဇာမိသားစုဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဆွစ်ဇာလန်ကလပ် ယန်းဘွိုင်းအသင်းကို အရှက်တကွဲ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းရဲ့နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ နေရာကို အစားဝင်နိုင်မယ့် နည်းပြတွေကို စတင် ရှာဖွေနေကြောင်း ဗြိတိန်အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြသွားကြပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဆန်ချို ၊ ဗာရန်း ၊ ရိုနယ်ဒိုနဲ့ ဟီတန် စတဲ့ ကစားသမား လေးဦးကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၀၀သန်းကျော် အကုန်အကျခံကကာ ခေါ်ယူထားပြီး အဆိုပါ ကစားသမား လေးဦးအနက် ဟီတန်တဦးထဲကလွဲရင် ကျန်ကစားသမား သုံးဦးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေပါ။
ဒါကြောင့်ပဲ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်မိသားစု ဖြစ်တဲ့ ဂလေဇာမိသားစုက သူတို့အသင်းဟာ ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပြီး ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာတင် ယန်းဘွိုင်းအသင်းကို အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အသင်းအပေါ် စီမံနိုင်မှုကို သံသယဝင်လာကြပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဂလေဇာမိသားစုဟာ ဆိုးလ်ရှားကို ဆက်လက် ယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် တဖက်မှာလည်း အကယ်၍ ဆိုးလ်ရှားကိုသာ ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ဖြစ်ပါက သူ့ရဲ့နေရာကို အစားဝင်မယ့် နည်းပြတွေကို စတင် ရှာဖွေနေပြီး ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဟောင်း ကွန်တီ ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်းနဲ့ လက်စတာနည်းပြ ရော်ဂျာ်တို့ဟာ ဂလေဇာမိသားစုရဲ့ နည်းပြစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေကြောင်း နာမည်ကျော် သတင်းဌာန တခု ဖြစ်တဲ့ Mirror သတင်းဌာနက ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ နည်းပြသုံးဦးအနက် ဂျူဗင်တပ် ၊ ချယ်လ်ဆီး ၊ အင်တာမီလန်အသင်းတို့နဲ့ ဆုဖလားတွေ ရရှိထားတဲ့ ကွန်တီဟာ ဂလေဇာမိသားစုရဲ့ စိတ်ကြိုက် နည်းပြတဦး ဖြစ်သလို ကွန်တီကလည်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာကြောင့် အကယ်၍ ဆိုးလ်ရှားသာ ထုတ်ပယ်ခံရပါက ကွန်တီဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆန်ချိုအပေါ်ထားတဲ့ သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
စပါးနဲ့ချဲလ်ဆီး၊ဝက်ဟမ်းနဲ့ မန်ယူ ပွဲကောင်းတွေပါတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ် (၅)ရလဒ်တွေကို ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ ပေါလ်မာဆင်